ပရီးမီးယားလိဂ်ပွဲစဉ်(၁၀)အပြီးမှာ ဒီ(၃)သင်းလုံးဟာ ရှုံးပွဲမရှိကြသေးပါဘူး
ပရီးမီးယားလိဂ်မှာ စွမ်းဆောင်ရည်ကောင်းတွေကို ပြနေတဲ့ မန်စီးတီး ၊ လီဗာပူးလ်နဲ့ ချယ်လ်ဆီး
30 Oct 2018 . 2:41 PM
လက်ရှိ ပရီးမီးယားလိဂ်မှာတော့ မန်စီးတီး ၊ လီဗာပူးလ်နဲ့ ချယ်လ်ဆီးအသင်းတွေဟာ စွမ်းဆောင်ရည်ကောင်းတွေကို ပြသနေကြပါတယ်။ ပရီးမီးယားလိဂ်ပွဲစဉ်(၁၀)အပြီးမှာ ဒီ(၃)သင်းလုံးဟာ ရှုံးပွဲမရှိကြသေးပါဘူး။ ပရီးမီးယားလိဂ် ပွဲစဉ်(၁၀)ပွဲအပြီးမှာ အသင်း(၃)သင်းရှုံးပွဲမရှိတာဟာ ပရီးမီးယားလိဂ်သမိုင်းတစ်လျှောက် ပထမဆုံးအကြိမ်လည်း ဖြစ်ပါတယ်။
လက်ရှိမှာ ရမှတ်(၂၆)မှတ်နဲ့ ပရီးမီးယားလိဂ်အမှတ်ပေးဇယားကို ဦးဆောင်နေတဲ့ မန်စီးတီးအသင်းဟာ ပရီးမီးယားလိဂ်(၁၀)ပွဲကစားအပြီးမှာ (၈)ပွဲနိုင် ၊ (၂)ပွဲသရေရလဒ်ရရှိထားပါတယ်။ မန်စီးတီးအသင်းဟာ ရှေ့တစ်ပတ်မှာ ဆောက်သမ်တန်အသင်းနဲ့ ကစားရမှာဖြစ်တာကြောင့် ဒီအနေအထားကိုဆက်ထိန်းထားနိုင်ဖို့ ရှိနေပါတယ်။
မန်စီးတီးအသင်းရဲ့ ရှေ့လာမယ့် ပရီးမီးယားလိဂ်(၅)ပွဲ
လီဗာပူးလ်အသင်းဟာလည်း ရမှတ်(၂၆)မှတ်ရရှိထားပြီး ဂိုးကွာခြားချက်ကြောင့်သာ အမှတ်ပေးဇယားရဲ့ ဒုတိယနေရာမှာရပ်တည်နေတာပါ။ လီဗာပူးလ်အသင်းဟာ ပရီးမီးယားလိဂ်(၁၀)ပွဲကစားအပြီးမှာ (၈)ပွဲနိုင် ၊ (၂)ပွဲသရေရလဒ်ရရှိထားပါတယ်။ ရှေ့တစ်ပတ်မှာကစားမယ့် ပရီးမီးယားလိဂ်ပွဲစဉ်မှာတော့ လီဗာပူးလ်အသင်းဟာ အာဆင်နယ်အသင်းရဲ့ အိမ်ကွင်းမှာသွားရောက် ယှဉ်ပြိုင်ကစားရမှာဖြစ်တာကြောင့် လက်ရှိအနေအထားကို ဆက်ထိန်းထားနိုင်မလားဆိုတာ စိတ်ဝင်စားဖို့ကောင်းနေပါတယ်။
လီဗာပူးလ်အသင်းရဲ့ ရှေ့လာမယ့် ပရီးမီးယားလိဂ်(၅)ပွဲ
နည်းပြ ဆာရီ Sarri ရဲ့ ချယ်လ်ဆီးအသင်းဟာလည်း လက်ရှိအချိန်ထိ ပရီးမီးယားလိဂ်မှာ ရှုံးပွဲမရှိကစားထားပါတယ်။ ချယ်လ်ဆီးအသင်းဟာ ပရီးမီးယားလိဂ်(၁၀)ပွဲကစားအပြီးမှာ (၇)ပွဲနိုင် ၊ (၃)ပွဲသရေရလဒ်ရရှိထားတာပါ။ ချယ်လ်ဆီးအသင်းရဲ့ ရှေ့လာမယ့်ပွဲစဉ်တွေဟာလည်း အနည်းငယ်ချောင်သလိုရှိတာကြောင့် အသင်းအနေနဲ့ ဒီအနေအထားကိုဆက်ထိန်းသွားဖို့ ရှိနေပါတယ်။
ချယ်လ်ဆီးအသင်းရဲ့ ရှေ့လာမယ့် ပရီးမီးယားလိဂ်(၅)ပွဲ
Photo: Goal.com , Sports Illustrated , Stadium Astro
ပရီးမီးယားလိဂျမှာ စှမျးဆောငျရညျကောငျးတှကေို ပွနတေဲ့ မနျစီးတီး ၊ လီဗာပူးလျနဲ့ ခယျြလျဆီး
လကျရှိ ပရီးမီးယားလိဂျမှာတော့ မနျစီးတီး ၊ လီဗာပူးလျနဲ့ ခယျြလျဆီးအသငျးတှဟော စှမျးဆောငျရညျကောငျးတှကေို ပွသနကွေပါတယျ။ ပရီးမီးယားလိဂျပှဲစဉျ(၁၀)အပွီးမှာ ဒီ(၃)သငျးလုံးဟာ ရှုံးပှဲမရှိကွသေးပါဘူး။ ပရီးမီးယားလိဂျ ပှဲစဉျ(၁၀)ပှဲအပွီးမှာ အသငျး(၃)သငျးရှုံးပှဲမရှိတာဟာ ပရီးမီးယားလိဂျသမိုငျးတဈလြှောကျ ပထမဆုံးအကွိမျလညျး ဖွဈပါတယျ။
လကျရှိမှာ ရမှတျ(၂၆)မှတျနဲ့ ပရီးမီးယားလိဂျအမှတျပေးဇယားကို ဦးဆောငျနတေဲ့ မနျစီးတီးအသငျးဟာ ပရီးမီးယားလိဂျ(၁၀)ပှဲကစားအပွီးမှာ (၈)ပှဲနိုငျ ၊ (၂)ပှဲသရရေလဒျရရှိထားပါတယျ။ မနျစီးတီးအသငျးဟာ ရှတေ့ဈပတျမှာ ဆောကျသမျတနျအသငျးနဲ့ ကစားရမှာဖွဈတာကွောငျ့ ဒီအနအေထားကိုဆကျထိနျးထားနိုငျဖို့ ရှိနပေါတယျ။
မနျစီးတီးအသငျးရဲ့ ရှလေ့ာမယျ့ ပရီးမီးယားလိဂျ(၅)ပှဲ
လီဗာပူးလျအသငျးဟာလညျး ရမှတျ(၂၆)မှတျရရှိထားပွီး ဂိုးကှာခွားခကျြကွောငျ့သာ အမှတျပေးဇယားရဲ့ ဒုတိယနရောမှာရပျတညျနတောပါ။ လီဗာပူးလျအသငျးဟာ ပရီးမီးယားလိဂျ(၁၀)ပှဲကစားအပွီးမှာ (၈)ပှဲနိုငျ ၊ (၂)ပှဲသရရေလဒျရရှိထားပါတယျ။ ရှတေ့ဈပတျမှာကစားမယျ့ ပရီးမီးယားလိဂျပှဲစဉျမှာတော့ လီဗာပူးလျအသငျးဟာ အာဆငျနယျအသငျးရဲ့ အိမျကှငျးမှာသှားရောကျ ယှဉျပွိုငျကစားရမှာဖွဈတာကွောငျ့ လကျရှိအနအေထားကို ဆကျထိနျးထားနိုငျမလားဆိုတာ စိတျဝငျစားဖို့ကောငျးနပေါတယျ။
လီဗာပူးလျအသငျးရဲ့ ရှလေ့ာမယျ့ ပရီးမီးယားလိဂျ(၅)ပှဲ
နညျးပွ ဆာရီ Sarri ရဲ့ ခယျြလျဆီးအသငျးဟာလညျး လကျရှိအခြိနျထိ ပရီးမီးယားလိဂျမှာ ရှုံးပှဲမရှိကစားထားပါတယျ။ ခယျြလျဆီးအသငျးဟာ ပရီးမီးယားလိဂျ(၁၀)ပှဲကစားအပွီးမှာ (၇)ပှဲနိုငျ ၊ (၃)ပှဲသရရေလဒျရရှိထားတာပါ။ ခယျြလျဆီးအသငျးရဲ့ ရှလေ့ာမယျ့ပှဲစဉျတှဟောလညျး အနညျးငယျခြောငျသလိုရှိတာကွောငျ့ အသငျးအနနေဲ့ ဒီအနအေထားကိုဆကျထိနျးသှားဖို့ ရှိနပေါတယျ။
ခယျြလျဆီးအသငျးရဲ့ ရှလေ့ာမယျ့ ပရီးမီးယားလိဂျ(၅)ပှဲ
by Naing Linn . 53 mins ago